आज ऋषिपञ्चमी पर्व मनाईंदै – ToplineKhabar
काठमाडौं, भदौ २१ । भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषिपञ्चमी पर्व मंगलबार सप्तर्षिको पूजा गरी वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाले मनाउँदैछन् ।
बिहानै उठेर महिलाहरु नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई ३ सय ६५ दतिवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्छन् ।
रजस्वलाको समयमा छाइछुइ लगायत कुनै त्रुटी भएको भए ऋषिपञ्चमीको दिन अरुन्धतीसहित सप्तर्षिको पूजा गर्नाले त्यसबाट मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास छ ।
आजको दिन दतिवन, गाईको गोबर, माटो र खरानी प्रयोग गरी स्नान गरेर पञ्चगव्य सेवन गर्नाले दोष निवारण हुन्छ भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले बताए ।
सुयोग्य र गुणसम्पन्न सन्तान प्राप्तिका लागि पनि ऋषिपञ्चमीको व्रत एवम् पूजा आवश्यक भएको धर्मशास्त्रविद्को भनाइ छ । काठमाडौंको टेकुमा रहेको ऋषेश्वर मन्दिरसहितका अरु मन्दिरमा महिलाको भीड लाग्ने गर्छ ।
← काठमाडौंमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे
काभ्रेमा श्रीमानले बञ्चरोले हानेर श्रीमतीको हत्या →
प्रहरी अधिकृतको प्रश्न- आफैं कतिबेला पुरिने हो, जनताको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
February 2, 2017 toplinekhabar 0
घुसकाण्डको छानविन गर्न अख्तियार द्धारा टोली गठन
विप्लव माओवादीको महाधिवेशनको बन्दसत्र आजबाट शुरु हुँदै
February 16, 2017 toplinekhabar 0